Mody manaitra avy any amin’ny ilan’ny fiara an-kavia izy ireo nefa efa misy namany mamoha ny varavarana sy misava ny ao anatiny mihitsy any amin’ny ilan’ny fiara an-kavanana. Ho an’ireo mpandeha an-tongotra indray dia sinto-mahery avy hatrany no hataon’ireo mpanao ratsy ary lasa mitsoaka izy ireo avy eo. Roa isan’andro raha kely no lasibatra, hoy izy, antony nametrahan’izy ireo ny andrimasom-pokontany manerana ireo sektera fito izay miasa aloha be raha oharina amin’ireo fokontany sasany. Miantso ny rehetra mba ho mailo ny tenany, indrindra ho an’ireo mampiasa ny lalana etsy Anosizato Atsinanana mihazo ny Fasan’ny karana. Mikasika ny lalana ao amin’ity fokontany iray ity dia nomarihin-dRandrianarijaona Liva fa tena mijaly tanteraka ny mponina amin’izao fotoam-pahavaratra izao. Ireo kodiarana fiara efa tsy miasa intsony no hampiasaina dia hatambatra ho fiarovana an’ireo olon-dehibe sy ireo ankizy madinika. Nomarihiny fa efa nisy ihany ny fampanantenana nataon’ny fanjakana hanamboarana ny lalana ao anatin’ity fokontany ity saingy tsy mbola tanteraka hatramin’izao.